स्मरणशक्ति बढाउन चाहानुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस - Gokarna News
स्मरणशक्ति बढाउन चाहानुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस
सोमबार, कार्तिक १९, २०७५ by Gokarna News
एजेन्सी– मानव मस्तिष्क एक जटिल संरचना हो । मानिसलाई लाग्न सक्छ कि मस्तिष्कलाई कुनै पनि कृत्रिम गतिविधिबाट प्रभाव पार्न सकिँदैन । तर, त्यस्तो होइन । विभिन्न अनुसन्धानले भनेका छन्, त्यस्ता थुप्रै कृत्रिम गतिविधि छन्, जसले मस्तिष्कको न्युरोन्स बनाउन सक्छ । यस्ता गतिविधि र खाद्यपदार्थले स्मरणशक्ति वृद्धि गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ ।
डेंगुबाट यसरी बच्नुहोस
सुतेर उठेपछि जरुर मिलाउनुहोस् ओछ्यान, नत्र हुनेछ…
यी रोगका लागि आलुको बोक्रा फाइदाजनक
शरीरका यी अंगहरू बारम्बार नछुनुहोस्
शरीरका यी अंगहरू बारम्बार नछुनुहोस्ः बिरामी पर्नुहोला